သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုရမလဲ
သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း (၅) အုပ်
18 Oct 2018 . 12:30 PM
ကဲ. . . သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်လည်း စတင်တော့မှာဆိုတော့ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ စာအုပ်စာပေတွေ စုဆောင်းနေလောက်ပါပြီ။ ပိတ်ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် ဗဟုသုတလည်း ဖြစ်စေသလို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလည်း ဖြစ်စေတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို ညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ အနားယူနေတုန်း ဘဝအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို အခရာပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပုဏ္ဏားဘကွန်း (မင်းသိင်္ခ)
‘ပုဏ္ဏားဘကွန်း’ စာအုပ်ဟာ အပိုင်း (၁) နဲ့ အပိုင်း (၂) အနေနဲ့ နှစ်တွဲထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဝတ္ထုလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ မူရင်းဝတ္ထုကြီးကို ကျော်သူနဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့က ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း ရှမ်းရှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဝတ္ထုကြီးရဲ့အစပိုင်းမှာတော့ ကူလီသမား ပုဏ္ဏားဘကွန်းဟာ သူဌေးကြီး ပုဏ္ဏားဘကွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံပုံကို အစချီရေးသားထားပါတယ်။
နာမည်တူ ဘကွန်းနှစ်ယောက် စကားလက်ဆုံကျနေတုန်း ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးဝင်ရောက်လာပြီး ကူလီသမား ပုဏ္ဏားဘကွန်းကို ဗေဒင်တွက်ချက်ကြည့်ရာမှ နာမည်ချင်းတူရုံမက မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးချိန်ပါ ဆင်တူနေတာကို တွေ့ရှိသွားပါတယ်။ အကုန်ဆင်တူပေမယ့် ဘဝအခြေအနေချင်း ကွာခြားပုံကို သိရှိရပြီး သူ့ဘဝအခြေအနေကို အားငယ်သွားတဲ့ ကူလီသမား ပုဏ္ဏားဘကွန်းကို အကြောင်းပြုပြီး သူဌေးကြီး ပုဏ္ဏားဘကွန်းက သူ့ရဲ့အထုပ္ပတ္တိကို ပြန်ပြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်ရပ်ကွက်လုံးရဲ့ခိုင်းဘက် ‘ဘုံကျွန်’ ဘဝမှ သေအောက်အောင်အထိ စိတ်ညစ်ခဲ့ရပုံ၊ အနှိမ်ခံဘဝကို ရောက်ခဲ့ရပုံမှအစ သူဌေးကြီးဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့ပုံအဆုံးကို အသေးစိတ်ရေးသားထားတဲ့ ဝတ္ထုရှည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးနိုင်ရုံမက ရသစာပေသဘောကိုပါ ခံစားမိစေတဲ့ ဝတ္ထုကြီးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား (ဖေမြင့်)
ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ ‘မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား’ စာအုပ်ဟာ ‘Reader Digest’ မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက် ပထမဆုံးရှိရမယ့်အရာက ‘အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်’ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်လိုစိတ်ရှိသူ၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသူနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေဟာ ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှု၊ ပညာဥာဏ်ရှိမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတွေဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေပါ။ နာမည်ကျော် ဂစ်တာသမား လက်စ်ပေါလ် (Les Paul) ၊ စူးစမ်းရှာဖွေရေးသမား ရွိုင်းချက်မန်းအန်ဒရူး (Roy Chapman Andrews) နဲ့ စာရေးဆရာ ဟမ်ဖရီ ဖရန်စစ် အဲလစ် (Humphry Francis Ellis) တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေရဲ့ ဘဝအခက်အခဲနဲ့ ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတာ အသေးစိတ်ရေးသားထားတဲ့အတွက် ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်လို့ ညွှန်းပါရစေ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား (ဖေမြင့်)
(၃) မာန် (ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ)
လူငယ်စာရေးဆရာ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟရဲ့ မာန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလည်း ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဖတ်ရှုထိုက်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် ဘဝမှာ ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေ ရှိပါစေ၊ အားမငယ်ကြဖို့ သတ္တိရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြဖို့ကို အဓိကရေးသားထားပါတယ်။ “မာန်” ၊ “နှမ်းတစ်စေ့မဟုတ်တဲ့ ခဲတစ်လုံး”၊ “ လူ (၃) မျိုး”၊ “ကိုယ့်ဘဝရဲ့ မီးအိမ်ရှင်” ၊ “ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်” ၊ “ ကြိုးစားဖို့က နံပါတ် ၁” စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရုံမက စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တိုင်း လက်စွဲဆောင်ထားရမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပါလို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
(၄) ပါပီလွန်နှင့် ဗင်ကို (ဦးလှဝင်း – လေသူရဲတစ်ဦး)
ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီး ဟင်နရီချာရီးယာ (Henri Charrière) ရဲ့ ‘Papillon and Banco’ ဖြစ်ရပ်မှန်စွန့်စားခန်းဝတ္ထုကြီးကို ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) က ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အကျဉ်းစခန်းမှာ (၁၃) နှစ်တိတိ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ပါပီလွန် (Papillon) တစ်ယောက် လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လိုပြေးထွက်ခဲ့သလဲဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်ဖွယ် ရေးသားထားပါတယ်။ စွန့်စားခန်းဝတ္ထုဖြစ်တာနဲ့အညီ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကျရှုံးခဲ့ပါစေ နောက်မဆုတ်တဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း အတိုင်းသားတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ပါပီလွန်နှင့် ဗင်ကို (ဦးလှဝင်း – လေသူရဲတစ်ဦး)
(၅) သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့ (အတ္တကျော်)
ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ ‘သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့’ စာအုပ်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးလာပုံ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲလာပုံနဲ့ အဲဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို နားမလည်ရင် ရောဂါဆိုးတွေ ကပ်ငြိလာတတ်ပုံတွေကို ပညာပေးထားပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ‘လိင်ပညာပေး’ ကို အသားပေးဖော်ပြထားတဲ့အတွက် စာအုပ်ထဲမှာ နားရှက်စရာ အသုံးအနှုန်းတွေ ပါနိုင်ပါတယ်။ (စာရေးဆရာကိုယ်တိုင်လည်း စကားလုံးမကြမ်းအောင် အတက်နိုင်ဆုံး ရေးသားထားပါတယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။)
သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့ (အတ္တကျော်)
“သားတို့အရွယ် ယောက်ျားပျိုလေးတွေက ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ခက်ထန်မာကြောတဲ့သူတွေကို လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် ကိုးကွယ်တတ်ကြတယ်။ သက်စွန့်ဆံဖျား စွန့်စားပြတာတွေ၊ လက်သီးထိုးတာလို၊ သိုင်းကစားပြတာလိုမျိုးတွေနဲ့ သတ်ရဲပုတ်ရဲတာတွေလည်း သားတို့အရွယ် ကြီးကောင်ဝင်စ ယောက်ျားပျိုလေးတွေက အထင်ကြီးတတ်ကြသေးတယ်။ Sylvester Stallone ၊ Steven Seagal ၊ Van Damme ၊ Arnold နဲ့ Jet Li တို့ဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူပျိုပေါက်စတွေရဲ့အားကျတာကို ခံရတဲ့သူတွေပါပဲ။ သူတို့တွေရဲ့လက်ရုံးရည်ထက် နှလုံးရည်ကို ထဲထဲဝင်ထင်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး အားကျတာမျိုးက ပိုပြီးသဘာဝမကျပေဘူးလား သားရယ်” ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်လေးက ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် အသိပညာဖြစ်ဖွယ် ကောင်းပါတယ်။
ကဲ . . ဒါတွေကတော့ သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်မှာ အနားယူတုန်း ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေသလို ကိုကိုမမတွေလည်း ဖတ်သင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပေမယ့် ဈေးမကြီးတဲ့အတွက် ဝယ်ဖတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များရှိရင် Comment မှာ ဝေငှသွားပါလား။
သီတငျးကြှတျပိတျရကျမှာ ဖတျရှုသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျး (၅) အုပျ
ကဲ. . . သီတငျးကြှတျရုံးပိတျရကျလညျး စတငျတော့မှာဆိုတော့ စာဖတျဝါသနာပါတဲ့ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ စာအုပျစာပတှေေ စုဆောငျးနလေောကျပါပွီ။ ပိတျရကျအတှငျးမှာ ကိုယျ့အတှကျ ဗဟုသုတလညျး ဖွဈစသေလို စိတျဓာတျခှနျအားလညျး ဖွဈစတေဲ့ စာအုပျကောငျးတှကေို ညှနျပေးခငျြပါတယျ။ အနားယူနတေုနျး ဘဝအတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈစတေဲ့ စာအုပျကောငျးတှကေို အခရာပရိသတျကွီးအတှကျ တငျပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) ပုဏ်ဏားဘကှနျး (မငျးသိင်ျခ)
‘ပုဏ်ဏားဘကှနျး’ စာအုပျဟာ အပိုငျး (၁) နဲ့ အပိုငျး (၂) အနနေဲ့ နှဈတှဲထှကျရှိခဲ့ပွီး ဆရာကွီးမငျးသိင်ျခရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးဝတ်ထုလို့တောငျ ဆိုနိုငျပါသေးတယျ။ မူရငျးဝတ်ထုကွီးကို ကြျောသူနဲ့ ထကျထကျမိုးဦးတို့က ရုပျရှငျအဖွဈ ပွနျလညျအသကျသှငျးတဲ့အခြိနျမှာလညျး ရှမျးရှမျးတောကျ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဝတ်ထုကွီးရဲ့အစပိုငျးမှာတော့ ကူလီသမား ပုဏ်ဏားဘကှနျးဟာ သူဌေးကွီး ပုဏ်ဏားဘကှနျးနဲ့ တှဆေုံ့ပုံကို အစခြီရေးသားထားပါတယျ။
နာမညျတူ ဘကှနျးနှဈယောကျ စကားလကျဆုံကနြတေုနျး ကိုရငျကွီးတဈပါးဝငျရောကျလာပွီး ကူလီသမား ပုဏ်ဏားဘကှနျးကို ဗဒေငျတှကျခကျြကွညျ့ရာမှ နာမညျခငျြးတူရုံမက မှေးနေ့၊ မှေးလ၊ မှေးခြိနျပါ ဆငျတူနတောကို တှရှေိ့သှားပါတယျ။ အကုနျဆငျတူပမေယျ့ ဘဝအခွအေနခေငျြး ကှာခွားပုံကို သိရှိရပွီး သူ့ဘဝအခွအေနကေို အားငယျသှားတဲ့ ကူလီသမား ပုဏ်ဏားဘကှနျးကို အကွောငျးပွုပွီး သူဌေးကွီး ပုဏ်ဏားဘကှနျးက သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကို ပွနျပွောငျးပွောပွလိုကျပါတယျ။ တဈရပျကှကျလုံးရဲ့ခိုငျးဘကျ ‘ဘုံကြှနျ’ ဘဝမှ သအေောကျအောငျအထိ စိတျညဈခဲ့ရပုံ၊ အနှိမျခံဘဝကို ရောကျခဲ့ရပုံမှအစ သူဌေးကွီးဘဝကို ရောကျရှိခဲ့ပုံအဆုံးကို အသေးစိတျရေးသားထားတဲ့ ဝတ်ထုရှညျကွီးဖွဈပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျတှအေတှကျ စိတျဓာတျခှနျအားပေးနိုငျရုံမက ရသစာပသေဘောကိုပါ ခံစားမိစတေဲ့ ဝတ်ထုကွီးတဈပုဒျဖွဈပါတယျ။
(၂) မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာ သခြောပွီလား (ဖမွေငျ့)
ဆရာဖမွေငျ့ရဲ့ ‘မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာ သခြောပွီလား’ စာအုပျဟာ ‘Reader Digest’ မဂ်ဂဇငျးမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးတှကေို ပွနျလညျစုစညျးပွီး ထုတျဝထေားတာဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျကွီးပှားဖို့အတှကျ ပထမဆုံးရှိရမယျ့အရာက ‘အောငျမွငျခငျြတဲ့စိတျဓာတျ’ ပဲဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျလိုစိတျရှိသူ၊ ရညျမှနျးခကျြကွီးမားသူနဲ့ စိတျဓာတျခိုငျမာသူတှဟော ဇှဲကွီးကွီးနဲ့ ကွိုးစားလိုကျတဲ့အခါ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျကို ရောကျသှားတာဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျဖို့ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ကြှမျးကငျြလိမ်မာမှု၊ ပညာဉာဏျရှိမှုနဲ့ စိတျဓာတျခိုငျမာမှုတှဟော မရှိမဖွဈလိုအပျခကျြတှပေါ။ နာမညျကြျော ဂဈတာသမား လကျဈပေါလျ (Les Paul) ၊ စူးစမျးရှာဖှရေေးသမား ရှိုငျးခကျြမနျးအနျဒရူး (Roy Chapman Andrews) နဲ့ စာရေးဆရာ ဟမျဖရီ ဖရနျစဈ အဲလဈ (Humphry Francis Ellis) တို့လို ပုဂ်ဂိုလျကြျောတှရေဲ့ ဘဝအခကျအခဲနဲ့ ဘယျလိုကြျောဖွတျခဲ့သလဲဆိုတာ အသေးစိတျရေးသားထားတဲ့အတှကျ ဆယျကြျောသကျတှေ ဖတျရှုသငျ့ပါတယျလို့ ညှနျးပါရစေ။
မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာ သခြောပွီလား (ဖမွေငျ့)
(၃) မာနျ (ဒေါကျတာဖွိုးသီဟ)
လူငယျစာရေးဆရာ ဒေါကျတာဖွိုးသီဟရဲ့ မာနျဆိုတဲ့စာအုပျကလညျး ဆယျကြျောသကျတှေ ဖတျရှုထိုကျပါတယျ။ လူငယျတှအေတှကျ ဘဝမှာ ဘယျလိုအားနညျးခကျြတှေ ရှိပါစေ၊ အားမငယျကွဖို့ သတ်တိရှိရှိရငျဆိုငျဖွရှေငျးကွဖို့ကို အဓိကရေးသားထားပါတယျ။ “မာနျ” ၊ “နှမျးတဈစမေ့ဟုတျတဲ့ ခဲတဈလုံး”၊ “ လူ (၃) မြိုး”၊ “ကိုယျ့ဘဝရဲ့ မီးအိမျရှငျ” ၊ “ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ” ၊ “ ကွိုးစားဖို့က နံပါတျ ၁” စတဲ့ ခေါငျးစဉျတှကေလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးရုံမက စိတျဓာတျကအြားငယျနတေဲ့ ဆယျကြျောသကျတိုငျး လကျစှဲဆောငျထားရမယျ့ စာအုပျတဈအုပျပါလို့ ညှနျးခငျြပါတယျ။
(၄) ပါပီလှနျနှငျ့ ဗငျကို (ဦးလှဝငျး – လသေူရဲတဈဦး)
ပွငျသဈစာရေးဆရာကွီး ဟငျနရီခြာရီးယာ (Henri Charrière) ရဲ့ ‘Papillon and Banco’ ဖွဈရပျမှနျစှနျ့စားခနျးဝတ်ထုကွီးကို ဦးလှဝငျး (လသေူရဲတဈဦး) က ဘာသာပွနျဆိုထားတဲ့ စာအုပျဖွဈပါတယျ။ ပွငျသဈအကဉျြးစခနျးမှာ (၁၃) နှဈတိတိ အကဉျြးကနြတေဲ့ ပါပီလှနျ (Papillon) တဈယောကျ လှတျမွောကျအောငျ ဘယျလိုပွေးထှကျခဲ့သလဲဆိုတာ စိတျဓာတျခှနျအားဖွဈဖှယျ ရေးသားထားပါတယျ။ စှနျ့စားခနျးဝတ်ထုဖွဈတာနဲ့အညီ ဇာတျကောငျရဲ့ လှုပျရှားမှုနဲ့အတူ ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ဖတျရှုရမှာဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုပဲ ကရြှုံးခဲ့ပါစေ နောကျမဆုတျတဲ့ ယောကျြားကောငျးတဈယောကျရဲ့စိတျဓာတျကိုလညျး အတိုငျးသားတှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။
ပါပီလှနျနှငျ့ ဗငျကို (ဦးလှဝငျး – လသေူရဲတဈဦး)
(၅) သားငယျတို့ နားလညျဖို့ (အတ်တကြျော)
ဆရာအတ်တကြျောရဲ့ ‘သားငယျတို့ နားလညျဖို့’ စာအုပျဟာ ဆယျကြျောသကျတှေ ခန်ဓာကိုယျဖှံ့ဖွိုးလာပုံ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွောငျးလဲလာပုံနဲ့ အဲဒီပွောငျးလဲမှုတှကေို နားမလညျရငျ ရောဂါဆိုးတှေ ကပျငွိလာတတျပုံတှကေို ပညာပေးထားပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ သိသငျ့သိထိုကျတဲ့ ‘လိငျပညာပေး’ ကို အသားပေးဖျောပွထားတဲ့အတှကျ စာအုပျထဲမှာ နားရှကျစရာ အသုံးအနှုနျးတှေ ပါနိုငျပါတယျ။ (စာရေးဆရာကိုယျတိုငျလညျး စကားလုံးမကွမျးအောငျ အတကျနိုငျဆုံး ရေးသားထားပါတယျလို့ ဝနျခံထားပါတယျ။)
သားငယျတို့ နားလညျဖို့ (အတ်တကြျော)
“သားတို့အရှယျ ယောကျြားပြိုလေးတှကေ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးနဲ့ ခကျထနျမာကွောတဲ့သူတှကေို လူစှမျးကောငျးအဖွဈ ကိုးကှယျတတျကွတယျ။ သကျစှနျ့ဆံဖြား စှနျ့စားပွတာတှေ၊ လကျသီးထိုးတာလို၊ သိုငျးကစားပွတာလိုမြိုးတှနေဲ့ သတျရဲပုတျရဲတာတှလေညျး သားတို့အရှယျ ကွီးကောငျဝငျစ ယောကျြားပြိုလေးတှကေ အထငျကွီးတတျကွသေးတယျ။ Sylvester Stallone ၊ Steven Seagal ၊ Van Damme ၊ Arnold နဲ့ Jet Li တို့ဆိုရငျ တဈကမ်ဘာလုံးက လူပြိုပေါကျစတှရေဲ့အားကတြာကို ခံရတဲ့သူတှပေါပဲ။ သူတို့တှရေဲ့လကျရုံးရညျထကျ နှလုံးရညျကို ထဲထဲဝငျထငျရှုမွငျသုံးသပျပွီး အားကတြာမြိုးက ပိုပွီးသဘာဝမကပြဘေူးလား သားရယျ” ဆိုတဲ့ စာပိုဒျလေးက ဆယျကြျောသကျတှအေတှကျ အသိပညာဖွဈဖှယျ ကောငျးပါတယျ။
ကဲ . . ဒါတှကေတော့ သီတငျးကြှတျပိတျရကျမှာ အနားယူတုနျး ညီငယျ၊ ညီမငယျတှေ ဖတျရှုသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျးတှသေလို ကိုကိုမမတှလေညျး ဖတျသငျ့ပါတယျ။ အငျတာနကျမှာ အလှယျတကူဖတျရှုနိုငျပမေယျ့ ဈေးမကွီးတဲ့အတှကျ ဝယျဖတျကွပါလို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ စာဖတျသူတှရေဲ့စိတျထဲမှာ အကွိုကျဆုံးစာအုပျမြားရှိရငျ Comment မှာ ဝငှေသှားပါလား။